नेकपा खोटाङ एकता– कहाँ अड्कियो गाँठो ? के गर्दैछ नेतृत्व ! - Hamrokhotang
Home » Bishes » नेकपा खोटाङ एकता– कहाँ अड्कियो गाँठो ? के गर्दैछ नेतृत्व !
काठमाडौं २४ भदौं । केन्द्रमा नै पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) घोषणापछि नेकपा खोटाङ कमिटी एकताका लागि खोटाङे नेताहरु निक्कै ताते । उनीहरुले मूलभूत विषय समेत टुंग्याए तर मूल नेतृत्वमा सफलता हात पार्न सकेनन् । एकताका लागि सबै सहमति जुटिसकेको खोटाङमा नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमतिमा पुग्न नसक्दा खोटाङ नेकपाले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न सकेन । अहिले पनि नेकपा खोटाङको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ ।
नेकपाका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका सांसद तथा एमाले जिल्ला इन्चार्ज विशाल भट्टराईले पार्टी एउटै भइसकेकाले बार्गेनिङ नगरी सहमति जुटाउने प्रयास गर्दा पनि सफल हुन नसकेको जनाए । ‘अध्यक्ष कसले लिने भन्नेमा सहमति जुटेन, एक पक्षले अध्यक्ष आफूले पाउनेपर्ने र अर्कोतिर पनि अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने अडान रह्यो, दुवै पक्षले दाबी नछाड्दा सहमति जुटेन ।’ उनले हाम्रोखोटाङ डटकमसँग भने ।
इन्चार्ज केन्द्रले नै तोक्ने तर अध्यक्ष र सचिवमा जिल्लाले कुरा मिलाउनु पर्ने अवस्थाका कारण पनि खोटाङे नेतृत्व सहमतिमा पुग्न नसकेको बुझिएको छ । इन्चार्ज र सचिव एक पक्षलाई र अर्को पक्षलाई अध्यक्ष दिएको अवस्थामा सहमति जुट्ने सम्भावना थियो । तर, इन्चार्ज केन्द्रले नै तोक्ने भएपछि इन्चार्ज पद बाँकी राखेर अध्यक्ष र सचिवमा मात्र सहमति जुटाउने प्रयासमा जिल्ला नेतृत्वले सर्वसम्मत निर्णय लिन नसकेको हो ।
अध्यक्ष पद माओवादी केन्द्रको भागमा परेको खण्डमा भने धिरेन सर्वसम्मत हुने निश्चित छ । यसअघि अध्यक्ष उनलाई बनाउने माओवादीले निर्णय नै गरिसकेको छ । तर, अध्यक्ष एमालेको भागमा परेको अवस्थामा सचिव माओवादीलाई पर्यो भने सुरेश राईको सम्भावना बढी छ ।